आर्थिक – Fewa Times
काठमाडौं – नेपाली बजारमा आज पनि सुनको मूल्य बढेको छ । मंगलबार प्रतितोला ७०० रुपैयाँले बढ्दै सुन आज ९० हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज पनि ६ सय रुपैयाँले बढेर सुन ९१ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज तेजाबी सुन प्रतितोला ९१ हजार ६० मा कारोबार......
काठमाडौं - नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ । प्रतितोला ७०० रुपैयाँले बढ्दै सुन आज ९० हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार ९० हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य मंगलबार ९० हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । यस्तै तेजावी सुन आज ९० हजार......
फेरि घट्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलामा ?
काठमाडौं – नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य केही घटेको छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला ९० हजार २ सयमा कारोबार भइरहेको छ । आइतबार भन्दा आज ३ सय रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाए अनुसार आज तेजावी सुनको मूल्य ८९ हजार ७६० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला ९४० रुपैयाँ......
सुन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् आजको बजार भाउ
काठमाडौं – नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुन तोलाको पाँच सय रुपैयाँले घटेको हो । बिहीबार प्रतितोला ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज प्रतितोला ९० हजार पाँच सयमा कारोबार भइरहेको छ । महासंघका अनुसार आज तेजावी सुन......
लगातार बढेको सुनको मूल्य एक्कासी घट्यो ! कति पुग्यो तोलामा ?
असार १२,काठमाडौं- नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला ९० हजार ६०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यो विहिबारको मूल्य भन्दा ५०० रुपैयाँले कमी हो । विहिबार ९१ हजार १०० मा सुनको कारोबार भएको थियो । यस्तै आज चाँदी ९४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यो मूल्य विहिबार भन्दा......
बन्दाबन्दीमा डिडिसीले दियो दुग्धजन्य पदार्थमा भारि छुट
काठमाडौं - बन्दाबन्दीका कारण दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीमा कमी आउँदा मौज्दातमा वृद्धि भएकाले सरकारको स्वामित्व रहेको दुग्ध विकास संथान (डिडिसी) ले घ्यु, नौनी र धुलो दूधको मूल्य घटाएको छ । असार ३ गतेदेखि घ्युमा प्रतिलिटर रु २०, नौनीमा रु ८० र धुलो दूधमा रु १० छुट दिइएको छ । घ्युको खुद्रा मूल्यसँगै......